Linux 5.15 waxay la socotaa hagaajinta taageerada ee Btrfs, server-ka SMB, darawalka NTSF iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Linux 5.15 waxay la socotaa hagaajinta taageerada ee Btrfs, server SMB, darawalka NTSF iyo in ka badan
Kadib laba bilood oo horumar ah, Linus Torvalds wuxuu siidaayay kernel Linux 5.15 isbedelada muuqdana waxaa ka mid ah a Darawalka cusub ee NTFS oo leh taageero qoraal, module ksmbd oo leh hirgelinta SMB server, DAMON subsystem si ay ula socdaan gelitaanka xusuusta, quful horudhaca habka dhabta ah, fs-verity support in Btrfs iyo in ka badan.
Nooca cusub wuxuu helay 13,499 hagaajin oo ka yimid 1,888 horumariye, cabbirka balastarku waa 42 MB (isbeddelku wuxuu saameeyay 10,895 faylasha, 632,522 khadadka kood ayaa lagu daray, 299,966 xariiq ayaa laga saaray).
Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee Linux 5.15
Noocan cusub ee kernel-ka qaatay hirgelinta cusub ee nidaamka faylka NTFS, by Paragon Software. Kantaroolaha cusub waxa uu ku shaqayn karaa qaab qoraal iyo waxay taageertaa dhammaan astaamaha nooca hadda jira ee NTFS 3.1, oo ay ku jiraan sifooyinka faylalka la dheereeyey, liisaska gelitaanka (ACLs), habka isku-buufinta xogta, maaraynta hufan ee gaabsanaanta faylalka (yaraan), iyo ku-noqoshada isbeddellada diiwaanka si loo soo celiyo daacadnimada ka dib guul-darrooyinka.
Habka xarayntas Btrfs waxay taageertaa habka fs-verity, taas ayaa la adeegsadaa in si hufan loo xakameeyo hufnaanta iyo xaqiiqada faylalka gaarka ah iyadoo la adeegsanayo xashiishyada ama furayaasha sirta ah ee lagu kaydiyay aagga xogta badan ee la xidhiidha faylalka. Markii hore fs-verity waxa kaliya oo loo heli jiray FS Ext4 iyo F2fs.
btrfs sidoo kale waxay ku darsataa taageerada khariidaynta aqoonsiga isticmaalaha nidaamka faylalka rakiban (horey waxaa loogu taageeri jiray nidaamyada faylka FAT, ext4, iyo XFS). Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xidho faylasha isticmaale gaar ah qaybta dibadda ee rakiban iyo isticmaale kale nidaamka hadda jira.
Isbeddelada kale ee Btrfs waxaa ka mid ah: dedeji ku darista furayaasha tusaha hagaha si loo hagaajiyo waxqabadka abuurista faylka; Awoodda lagu shaqeynayo raid0 hal qalab iyo raid10 oo leh laba (tusaale ahaan, habka dib u habeynta matrix); ikhtiyaarka "badbaadin = ibadrots" in la iska indhatiro geed taago aan sax ahayn; dardargelinta hawlgalka "dir"; yaraynta isku dhacyada qufulka inta lagu jiro hawlgalada magaca beddelka; Awoodda isticmaalka qaybaha 4K ee nidaamyada leh cabbirka bogga 64K xusuusta.
EXT4, shaqo ayaa la qabtay si kor loogu qaado waxqabadka qorista delloc iyo habaynta faylalka agoonta (agoonta) ee sii jiraya sababtoo ah xaqiiqda ah in ay furnaadeen, laakiin waxay noqdeen in aan lagu xidhin buug-tusaha.
Isbeddel kale oo muuqda ayaa ah kaas ilaalinta dheeraadka ah ee xaaladaha jinsiyadeed ee qarsoon taas oo keeni karta in la fayl-gareeyo musuqmaasuqa marka wax laga akhrinayo khasnado iyadoo la maaraynayo meelaha bannaan ee faylka, oo lagu daray taageerada qufulka faylalka khasabka ah ee lagu hirgeliyey xannibaadda wicitaannada nidaamka ee horseedaya isbeddellada faylka ayaa meesha laga saaray. Sababo la xiriira xaaladaha tartanka suurtagalka ah, qufulyadan waxaa loo tixgeliyey kuwo aan la isku halayn karin oo laga saaray sannado badan ka hor.
Iyo sidoo kale Nidaamka hoose ee LightNVM waa la saaray, taas oo u ogolaatay in si toos ah loo galo darawalka SSD, iyada oo laga gudbayo lakabka ku dayashada. LightNVM waxay lumisay macnaheeda ka dib markii ay soo baxday heerarka NVMe ee bixiya suurtogalnimada aagagga (ZNS, Zoned Namespace).
Dhanka kale arrinka ha laga dhigo taageero lagu daray jadwalka asymmetrical u xilsaarida hawlaha kombuyuutarrada processor-ka ee dhismooyinka halkaas oo CPU-yada qaarkood ay oggolaadaan hawlo 32-bit ah qaarna kaliya waxay ku shaqeeyaan qaab 64-bit ah (tusaale, ARM). Habka cusub wuxuu u oggolaanayaa kaliya CPU-yada taageera hawlaha 32-bit in la tixgeliyo marka la qorsheynayo hawlaha 32-bit.
Naqshad dhisme ARC, taageerada miisaska bogga xusuusta saddex-heer iyo afar heer ayaa la hirgeliyay, taas oo sii ogolaan doonta taageerada 64-bit ARC Processors.
Dhinaca kontaroolayaasha waxaan ka heli karnaa kantaroolaha amdgpu waxay la jaanqaadi kartaa Cyan Skillfish APUs (ku qalabaysan Navi 1x GPUs). Taageerada codec-ga ee APU ee Kaarabka Jaallaha ah ayaa la hirgeliyay, Taageerada Aldebaran GPU ee la xoojiyey, Navi 24 cusub "Beige Goby" iyo ID-yada khariidad ku salaysan ee RDNA2 GPU ayaa lagu daray, horumarinta Bandhigyada Virtual (VKMS) ayaa la soo jeediyay, iyo taageerada ilaalinta heerkulka AMD Zen chips ayaa lagu daray 3.
Maamulaha amdkfd (loogu talagalay GPU-yada kala duwan sida Polaris) Wuxuu hirgeliyaa maamulaha xusuusta dalwaddii la wadaago (SVM) oo ku salaysan nidaamka hoosaadka maaraynta xusuusta kala duwan (HMM), kaas oo u oggolaanaya aaladaha leh unugyadooda maaraynta xusuusta (MMU) in la isticmaalo, kuwaas oo geli kara xusuusta ugu weyn. Xitaa iyadoo la kaashanayo HMM, waxaad abaabuli kartaa meel ciwaanka wadajirka ah oo u dhexeeya GPU iyo CPU, kaas oo GPU uu heli karo xusuusta ugu weyn ee habka.
Xakamaynta i915 ee garaafyada Intel waxay kordhisaa isticmaalka Maareeyaha Xusuusta Fiidiyowga ee TTM waxaana ku jira awooda lagu maareeyo isticmaalka awooda iyadoo lagu saleynayo GuC (Graphics Microcontroller). Diyaargarowga ayaa bilaabay hirgelinta taageerada Intel ARC Alchemist Graphics iyo Intel Xe-HP GPUs.
Isbeddelada kale taagan:
Darawalka nouveau waxa uu fuliyaa kontoroolka nalka dambe ee eDP panel isaga oo isticmaalaya DPCD (Xogta isku xidhka DisplayPort).
Taageerada lagu daray Adreno 7c Gen 3 iyo Adreno 680 GPUs ee darawalka msm.
Awoodda lagu dhisayo qalabka dhismaha ARM64 ee qaabka macaamiisha Hyper-V hypervisor ayaa la hirgeliyay.
Waxaa lagu daray dareewalka Virtio ee baska I2C, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku daydaan darawallada I2C ee qaabka paravirtualization adigoo isticmaalaya gadaalo kala duwan.
Darawalka gpio-virtio Virtio ayaa lagu daray si loogu ogolaado nidaamyada martida inay galaan khadadka GPIO ee uu bixiyo nidaamka martida loo yahay.
KVM hypervisor-ga wuxuu fuliyaa awoodda lagu soo bandhigo tirakoobyada qaab xisaabeedka toosan iyo logarithmic.
Dareewalka xidhidha, oo loo isticmaalo in lagu daro isku-xidhka shabakadaha, wuxuu ku darayaa taageerada nidaamka hoose ee XDP (eXpress Data Path), kaas oo kuu ogolaanaya inaad wax ka qabato xirmooyinka shabakada hal mar ka hor inta aan laga baaraandegin xirmooyinka shabakadda kernel Linux.
Xirmada wireless-ka ee mac80211 waxay taageertaa 6GHZ STA (Ogolaanshaha Ku Meel Gaarka ah ee Gaarka ah) ee LPI, SP, iyo VLP hababka, iyo sidoo kale awooda lagu habeynayo TWT (Target Wake Time) si gooni gooni ah habka marinka marinka.
Netfilter wuxuu ku darayaa darawalada qulqulka shabakada ee lagu soo koobay SRv6 (Qaybta Jidka IPv6).
Kaalmada sockmap ee lagu daray saldhigyada qulqulka Unix.
Darawalka IOMMU waxaa loo hirgeliyay chip-ka Apple M1.
Dareewalka codka ee loogu talagalay nidaamyada ku saleysan AMD Van Gogh APU.
Darawalka Realtek R8188EU ayaa lagu daray laanta diyaargarowga, kaasoo bedelay darawalkii hore (rtl8188eu) ee Realtek RTL8188EU 802.11 b / g / n chips wireless.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Linux 5.15 waxay la socotaa hagaajinta taageerada ee Btrfs, server SMB, darawalka NTSF iyo in ka badan
KDEApps8: KDE Community Apps ee maamulka nidaamka
Redcore Linux 2102 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa warkeeda